အသုံးပြုသူ:AMKLOVENHYT/Debian - ဝီကီပီးဒီးယား
စက်တင်ဘာ ၁၉၉၃; ၂၆ နှစ် အကြာက (၁၉၉၃-၀၉)
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် (/ˈdɛbiən/) သည်အ ပြောင်းကဲ့သို့ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေးစနစ် ရေးစပ်သောလုံးဝအ ခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအများဆုံးသောအောက် အေလိုင်စင် နှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းအားဖြင့်အုပ်စုတစ်စုချင်းစီမှာပါဝင်လဲ။
အလဲစီမံကိန်းပထမအၾက ၁၉၉၃ လ်ာက္လံုးမစစ္ေ၊လဲ ၀။၀၁ စက်တင်ဘာလအပေါ်ပြန်လွတ်လာခဲ့သည် ၁၅၊၁၉၉၃၊ နှင့်ပထမဦးဆုံး တည်ငြိမ် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ၁၉၉၆။
အလဲ တည်ငြိမ် လွှတ်ပေးရေးဌာနခွဲ သည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်လူကြိုက်အများဆုံးအဘို့အ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများ နှင့် ကွန်ယက်ကိုဆာဗာနှင့်အသုံးပြုခဲ့ပြီးတစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အများအပြားအခြားဖြန့်။
အဆိုပါစီမံကိန်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ကျော်ထွက်အင်တာနက်အားဖြင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏လမ်းညွှန်အားဖြင့်အ လဲစီမံကိန်းခေါင်းဆောင် နှင့်အသုံးအခြေခံစာရွက်စာတမ်းများ:အ လဲလူမှုရေး၊အလဲဖွဲ့စည်းပုံအ လဲအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအလမ်းညွှန်ချက်များ။ အသစ်ဖြန့်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားစဉ်မပြတ်၊လာမယ့်သမ္မတလောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပြန်လွတ်လာသည့်အချိန်-အခြေခံပြီး အေးခဲ။
၏တစ်ဦးအဖြစ်အစောဆုံး လည်ပတ်စနစ်များအပေါ်အခြေခံပြီး Linux၊မှတ်စု၊ဆံုးျဖတ္ခဲ့လဲဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေေ ဖရိကစီမံကိန္း။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဆွဲငင်အာရုံစိုက်မှုကိုနှင့်အထောက်အပံ့များအ ခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖာင္ေဒးရွင္း၊ကမအဆိုပါစီမံကိန်းအတွက်တနှစ်ကနေ ၁၉၉၄ နိုဝင်ဘာလမှနိုဝင်ဘာလ ၁၉၉၅။ အပေါ်မှာအဆုံးသတ်ရေး၏စပွန်ဆာ၊အလဲစီမံဖွဲ့စည်းသောအကျိုးအမြတ်မယူအဖွဲ့ အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲအများပြည်သူအကျိုးစီးပွား။
နေစဉ်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏အဓိကဆိပ္ကမ္း၊လဲဖရိက/Linux ကိုအသုံးပြုသည်၊အ Linux မှတ်စု နှင့် ဖရိကအစီအစဉ်၊အခြားဆိပ်ကမ်းများတည်ရှိမှုအပေါ်အခြေခံလောအရှာရန်အစေ့နှင့်အ ဖရိက HURD microkernel။ အားလုံးအသုံးပြုဖရိက userland နှင့်အ ဖရိက C စာကြည့်တိုက် (glibc)။
လဲ ၇ တပ်ဆင်ခနူး
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှအသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်အွန်လိုင်း repositories ဆံ့ ၅၀၀၀၀ ကျော် ဆော့ဖ်ဝဲများ အကြီးဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်။ လဲတရားသာအခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို၊သို့သော်မ-အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်မှအလဲ repositories။ လဲပါဝင်သည်လူကြိုက်အခမဲ့အစီအစဉ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် LibreOffice၊ မီးမြေခွေး ၊ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ၊ K၃b disc မပါ၊ ဗီအလ်စီမီဒီယာကစားသမား၊ GIMP ပုံရိပ်ကိုအယ်ဒီတာ၊ ရရိွႏိုင္ေသာ စာလံုးမ်ားကိုၾကည့္ရႈႏိုင္သ။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်ရေပန်းစားတဲ့ရွေးချယ်မှုအတွက် ဝက်ဘ်ဆာဗာ (။ မီးခွက်)။
လဲထောက်ခံပါတယ် Linux တရား၊ပူဇော် kFreeBSD အတွက်ဗားရှင်း ၇ ဒါပေမယ့်မ ၈၊ နှင့် ဖရိက Hurd ခြင်းများအတွက်။ ဖရိက/kFreeBSD ဖြန့်ချိခဲ့သည်အဖြစ်နည်းပညာကုိယ္တုိင္လာေေ ည့္ႏ-၃၂ နှင့် x၈၆-၆၄ ပုံစံများ၊ နှင့်ရှိသေး၏ပမာဏကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုရရှိနိုင်အလဲရဲ့ Linux။ အရာရှိတဦးကထောက်ခံမှုများအတွက် kFreeBSD ခဲ့ဖယ်ရှားများအတွက်ဗားရှင်း ၈ ခဲ့သောမပေး kFreeBSD-အခြေခံ။
အပြားအနံ့အ Linux ဆာင္ရြက္ေတည်ရှိသီးအသီးအဘို့ဆိပ်ကမ်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊အ i၃၈၆ ဆိပ်ကမ်းရှိအနံ့အည့္ႏ-၃၂ အလုပ္လုပ္ပါ ထာက္အ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာတိုးချဲ့ နှင့် စစ်မှန်သော-အချိန်အတဲြ၊အသက်ကြီး၊နှင့်အ x၈၆-၆၄။ အ Linux ဆာင္ရြက္ေမတရားဆံ့ ပြဿနာများ မရှိဘဲသတင်းရင်းမြစ်၊ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာများတွင်ရရှိနိုင်မ-အခမဲ့န္ေဆာင္မႈနှင့်အပြိုင်တပ်ဆင်မီဒီယာ။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကမ်းလှမ်းဗြီင့္ ပုံရိပ်တွေ များအတွက်တပ်ဆင်ခနိုင်ဒေါင်းသုံးပြီး BitTorrent သို့မဟုတ် jigdo။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ disks လည်းဝယ်မှလက်လီ။ အပြည့်အစုံတက်ထားကြပါတယ်၊အများအပြားဆိပ္မွ(amd၆၄ ဆိပ္ကမ္း၏ပါဝင်ပါသည် ၁၃ ဗွီသို့မဟုတ် ၈၄ ခ်ပ္)၊ ဒါပေမယ့်ကိုသာပထမ disc လိုအပ်သည်များအတွက်တပ်ဆင်ခ၊ေနိုငျပါသဆော့ဝဲလ်တွင်ပါရှိသောပထမဦးဆုံး disc ပုံရိပ်ကိုကနေအွန်လိုင်း repositories။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကမ်းလှမ်းကွဲပြားခြားနားသောကွန်ယက်ထည့်သွင်းခြင်းနည်းလမ်းများ။ အနည်းဆုံးအလဲကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ဖြစ်ပါတယ် netinst စီဒီ၊ကာမိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်တောလုပ်ရုံနှင့်အတူတစ်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အနောက်ပိုင်းမှာထည့်သွင်းဆော့ဖ်ဝဲကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ အခြားရွေးချယ်မှုရန်ဖြစ်သည်ဖက္မွာအပေါ်ကမှစ။
တပ်ဆင်ခပုံရိပ်တွေအ စပ် ပေါ်အချို့သောပုံစံများနှင့်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဖန်တီးတစ်ခု ပြောင်း ယူအက်စ်ဘီမောင်း(အသက်ရှင်သောအက်စ်ဘီ)။
အဆိုပါပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုချိန်ခွင်သည် ဖရိက GRUB ဗားရှင်း ၂ သော်လည်း၊အထုပ်အမည်ကရိုးရိုး grub နေစဉ်၊ဗားရှင်း ၁ ခဲ့ချိန်မှအမည်ပြောင်း grub-အမွေအ။ ဤပဋိပက္ခနှင့်အတူဥပမာ လင်းနပ်၊ဘယ်မှာ grub ဗားရှင်း ၂ အမည်ရှိ grub၂။
ကိုပုံမှန်ဖြန့်ချိမည်မှရွေးချယ်ထားသောဗြီတိပေးနူးကြား နင်၊ ဆယ္ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ Xfce နှင့် LXDE၊နှင့်မှအထူး disc ၁ ခ်ပ္။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည်ကြေညာသဂုတ္လ ၁၆၊၁၉၉၃၊အား လ်ာက္လံုးမစစ္ေ၊အဘယ်သူသည်ပိုင်းဟုခေါ်သောစနစ်"ကိုလဲ Linux လွှတ်ပေးရန်"။ "မိုက်ကရိုဆော့ဖ်"အဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်အဖြစ်တစ် ပေါင်း ၏ပထမဦးဆုံး၏ထို့နောက်-ချစ်သူရည်းစား Debra ရင္ၾနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်နာမည်။ ခင်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊အ Softlanding Linux စနစ္ (SLS)ခဲ့ရေပန်းစားတဲ့ Linux ဖြန့်ဖြူးအတွက်အခြေခံ Slackware။ အရိပ်ဆင်းရဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပျံ့နှံ့၏ ယွင်း သာ SLS လှုံ့ဆော်မစစ္ေတစ်ခုကိုစတင်ရန်။[./Debian#cite_note-FOOTNOTEScheetz199817-31 ]
လဲ ၀။၀၁၊စက္တင္ဘာလတြင္ထုတ္ျပန္သည္ ၁၅၊၁၉၉၃၊ပထမဦးဆုံးအများအပြားတွင်းဖြန့်ချိ။ ဗားရှင်း ၀။၉၀ ပထမဆုံးအများပြည်သူလွှတ်ပေး၊ ပေးထောက်ခံမှုဖြင့်စာပို့စာရင်းရှင်အဖြစ်လက်ခံမှာဘွယ်။ လွှတ်ပေးရန်ထည့်သွင်းအလဲ Linux အို၊မွ်ေမစစ္ေရဲ့မြင်ကွင်းကိုအဘို့အသစ် စက်လည်ပတ်ရေးစနစ်။ ဒါကြောင့်ခုနှစ်တွင်သူသည်ဟုခေါ်သည်ဖန်ဆင်းခြင်း၏တစ်ဦးဖြန့်ဖြူးအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားပွင့်လင်းအတွက်ဝိညာဉ်တော်၏အဖရိက။
အလဲစီမံကိန်းအ ၀။၉ ႏွင့္ဗားရှင်းအတွက် ၁၉၉၄ နှင့် ၁၉၉၅။ ဤအချိန်ကာလအတွင်းခဲ့သည်ပံ့ျဖင့္ အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကိုအခြေခံအုတ်မြစ် တနှစ်အဘို့။ လ်ာက္လံုးမစစ္ေလွှဲအပ်အခြေစိုက်စခန်းစနစ်၊အဓိကန္ေဆာင္မႈအလဲ၊အရုစ် Perens နှင့်မစစ္ေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အစီအထွားလာ။[./Debian#cite_note-FOOTNOTEScheetz199818-36 ] ပထမဆိပ်ကမ်းသို့ည့္ႏ-၃၂ ပုံစံများတွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ လဲ ၁။၁ အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် ၁၉၉၆။ အားဖြင့်အချိန်နှင့်မှကျေးဇူးတင်စကား လ်ာက္လံုးဂျက်၊အ dpkg ထုပ်မန်နေဂျာခဲ့ပြီးသားအနေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းလဲ။[./Debian#cite_note-FOOTNOTEKrafft200531.E2.80.9332-38 ]
၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ဘရုစ် Perens ယူဆမံကိန္း။ Perens ခဲ့တဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်မှတ်ယူဏာနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွဲလဲ။[./Debian#cite_note-FOOTNOTEHertzog20139-39 ] သူဆွဲနေတဲ့ လူမှုရေးသဘောတူစာချုပ် နှင့်တည်းဖြတ်ကြံပြုချက်များမှတစ်လအကြာဆွေးနွေးသို့အလဲလူမှုရေးသဘောတူစာချုပ်နှင့်အမိုက်ကရိုဆော့ဖ်။ ပြီးနောက်အ FSF ဆုတ္ခြာသူတို့ရဲ့စပွန်ဆာ၏အလယ်၌အ ခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲစိန်ခေါ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်ငြင်းခုံခြင်း၊ Perens အစပျိုးများ၏ဖန်တီးတရားဝင်အ ထီးအဖွဲ့အစည်း အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲအများပြည်သူအကျိုးစီးပွား မယ့်အစားရှာကြံအသစ်တဖန်အ FSF။ သူဦးဆောင်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၏အဆိုပါစီမံကိန်းကနေ ။ထွက် ဖို့ ကေတာ့။[./Debian#cite_note-FOOTNOTEScheetz199819-42 ] ဖန်တီးခဲ့သူကို BusyBox အစီအစဉ်စေဖို့အတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေအလဲနျတစ်ခုတည်းအပေါ်ရွည္ရွည္ေ၊နှင့်အရေးအသစ်တစ်ခုပေါ်က။ ထိုအချိန်ကာလအားဖြင့်မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ၁။၂ ပြန်လွတ်လာခဲ့သည်၊အဆိုပါစီမံကိန်းခဲ့ပြီးမှနီးပါးနှစ်ရာ။[./Debian#cite_note-FOOTNOTEScheetz199819-42 ] Perens လက်ဝဲစီမံကိန္းကို ၁၉၉၈။
↑ Debian -- Ports။
↑ Debian -- Debian GNU/Hurd။
↑ ChangeLog။ ibiblio။ 2016-08-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chapter3– Debian Releases။ Debian Documentation Team။ 10 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ A Brief History of Debian – A Detailed History။ October 13, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ debian-devel။ Debian။
↑ Amor, J. J.; Robles, G.; González-Barahona, J. M.; Rivas, F.: Measuring Lenny: the size of Debian 5.0 ResearchGate
↑ Debian – Packages။ Debian။ 2014-06-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Debian Moves to LibreOffice။ Debian။ 2012-03-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Noyes၊ Katherine (2012-01-11)။ Debian Linux Named Most Popular Distro for Web Servers။ PC World။ 2013-02-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Usage statistics and market share of Linux for websites။ W3Techs.com။ 2014-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chapter 2. What's new in Debian 7.0။ Release Notes for Debian 7.0 (wheezy), 32-bit PC။ Debian။ 2014-05-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Debian GNU/Hurd။ Debian (2014-05-01)။ 2014-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ architecture requalification status for wheezy။ Debian။ 2014-08-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Virtual Package: linux-image။ Debian။ 2014-08-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chapter2– Debian kernel source။ Debian Linux Kernel Handbook။ Alioth (2013-12-14)။ 2014-08-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Unofficial non-free CDs including firmware packages။ Debian။ 2014-08-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Debian on CDs။ Debian (2014-05-10)။ 2014-05-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Downloading Debian CD images with jigdo။ Debian (2014-05-10)။ 2014-05-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Downloading Debian CD/DVD images via HTTP/FTP။ Debian (2014-05-17)။ 2014-05-26 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Installing Debian GNU/Linux via the Internet။ Debian။ 2008-12-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 4.3. Preparing Files for USB Memory Stick Booting။ Debian GNU/Linux Installation Guide။ Debian (2010)။ 2014-05-27 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 6.3. Using Individual Components။ Debian GNU/Linux Installation Guide။ Debian (2013)။ December 24, 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2014-05-30 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Watson၊ J.A. (2013-05-28)။ Debian Linux 7.0 Wheezy: Hands on။ ZDNet။ 2014-06-10 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “For the CD images, it is useful to know that Debian supportsanumber of different desktops, including GNOME, KDE, Xfce and LXDE, and there isadifferent 'disk 1' image for each of these desktops.”
↑ Chapter 1 – Introduction – What is the Debian Project?။ A Brief History of Debian။ Debian (2013-05-04)။ 2014-06-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nixon, Robin (2010). Ubuntu: Up and Running. O'Reilly Media, 3. ISBN 978-0-596-80484-8။ 2014-06-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hillesley၊ Richard (2007-11-02)။ Debian and the grass roots of Linux။ IT Pro။ 2014-05-25 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Release-0.91။ ibiblio (1994-01-31)။ 2014-07-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Murdock၊ Ian A. (1994-01-06)။ The Debian Linux Manifesto။ ibiblio။ 2014-07-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chapter3– Debian Releases။ A Brief History of Debian။ Debian (2013-05-04)။ 2014-06-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chapter4– A Detailed History။ A Brief History of Debian။ Debian (2013-05-04)။ 2014-08-01 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hertzog 2013, p. 9.
↑ It's Time to Talk About Free Software Again။
↑ ၄၀.၀ ၄၀.၁ Scheetz 1998, p. 19.
↑ Perens၊ Bruce (2000-11-01)။ Building Tiny Linux Systems with Busybox–Part I။ Linux Journal။ 2014-06-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အသုံးပြုသူ:AMKLOVENHYT/Debian&oldid=369330" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ မေ ၂၀၁၇၊ ၀၉:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။